Agaasime Jubba: Masuul Abaalmarin Innaga Mudan | SAHAN ONLINE
Agaasime Jubba: Masuul Abaalmarin Innaga Mudan
Maxamed Cali Nuur oo ku magac Dheer Jubba, wuxuu muddo dheer Agaasime waaxeed ka ahaa xafiiska qorshaynta ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland, waxaa xilka agaasimaha guud ee wasaaradda loo dhiibay bishii October 2017, aqoonta iyo waayo-aragnimada dheer uu leeyahay iyo baahida maamul ee wasaaradaasi qabtay markii la eegay
Wuxuu muddo dheer madax ka ahaa mashruuca wadaaaga ah ee horumarinta degmooyinka ee JPLG, in ka badan 200 Mashruuc oo ay ka faa’iidaysteen qaar ka mid degmooyinka ayaa Puntland ka hirgalay intii uu xilka hayay, qaybtoodna weli waa socdaan. Mudadii uu xilka hayay waxaa abuuray 52 wado oo laami ah oo laga hirgaliyay magaalooyinka Puntland, Dugsiyo waxbarasho, Xarumo caafimaad , Shaqo abuur badan, adeegyo kale oo lo sameeyay shacabka Puntland, dakhliga dowladaha hoose oo kobcay, aqoonta iyo awooda maamulka ee qaabka xisaab celinta, qaabka hufnaanfta, iyo qaabka bulshada ay ula shaqeeyaan oo kor loo qaaday.
56 Wadooyin oo Laga Dhisay qaar ka mid ah degmooyinka
11 xarumo dadweyne (Community centers)
19 goobaha Caafimaad
25 Goobo waxbarasho oo heer degmo
3 degmo ayaa biyo galin laga sameeyo, oo kala Baylo, Eyl iyo Jiriiban
Dib u habayn iyo dhismayaal loo sameeyay Xarumaha maamulka ee degmooyinka EYL, Jariiban iyo Bender Bayla
Kor u qaadida dhaqaalaha maxaliga ee bulshada degmooyinka, iyadoo lix mashruuca la fuliyay.
Dhismaha Dhismayaal Cusub, dayactir iyo xarumo loo sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka.
Waxqabadka Mudadii uu Agaasimaha Ahaa
Muuqaalka Wasaaradda arrimaha gudaha 10 bilood ka hor
10kii bilood ee la soo dhaafay, Agaasimuhu wuxuu wasaaradda ka hirgaliyay Maktabada Wasaarada oo lagu kaydiyo xogaha wasaaradda oo ay ka mid yihiin siyaasadaha, shuruucda, Hagayaasha iyo Buugaaga tababarada ku bixiso Dowladaha hoose.
Wuxuu dib u Habayn ku sameeyay waxyaaha wasaarada iyo isku xirkooda, Habaynta shaqaalaha, iyadoo la soo kordhiyay Suul-saarka (finger Pirint) lagu ogaanayo shaqaalaha soo xaadira, habkan waxa lagu kala saarayaa shaqaalaha howlkarka ah, sida joogtada shaqooyinka u yimaada iyo kuwo kale. Wuxuu Dib-u habayn ku sameeyay xarunta dhexe ee waaarada arrimaha gudaha iyo xarunta magaaladda Bosaso.
16 degmo ayaa loo sameeyay qorshe howleedyo muddo 5 sanno soconaya. Qorshahaasi oo Baahiyahooda lagu daboolayo, iyadoo wasaaradu ku guulaystay in la kordhiyo waqtiga uu sii shaqaynayo mashruuca JPLG ee horumarinta degmooyinka.
Wasaaradu waxay tusaale iyo halbeeg u noqotay wasaaradaha arrimaha gudaha ee heer federaal iyo maamul goboleed ee Somaliya. Iyadoo Caasimadda Garoowe shirweyne loogu qabtay masuuliyiinta wasaaradaha iyo deeqbixiyaasha iyo hay’adaha caalamiga, waxaa lagu ammaanay guusha ay Puntland ka gaartay horumarinta degmooyinka iyo kobcinta awooda iyo aqoonta dowladaha hoose.
10 bilood ka dib markii dib-u-habayn lagu Sameeyay Wasaaradda
Mashruuca Diiwaangalinta Dadka Puntland.
Mashruuca diiwaangalinta dadka oo xukuumada Puntland u igmatay fulintiisa wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu ka mid ah yahay mid ka mid ah waajibaadka shaqo ee ugu muhiimsan wasaaradda arrimaha gudaha. Mashruucan oo wasaaradu la kaashanayso xarunta cilmi barista iyo horumarinta ee CIRPS/SGI oo taageero dhaqaale ka helaysa hay’ada horumarinta iskaashiga dowladda Talyaaniga waxaa si tijaabo looga hirgaliyay labo xaafadood oo caasimadda Garoowe ku yaal. Barnaamijkan oo dib-u-eegis lagu sameeyay, islamarkaana guulaystay waxaa lagu ballaarinayaa dhammaan degmooyinka Puntland.
Mashruucan waa qayb ka mid ah waajibaadka shaqo ee dowladda puntland u xilsaaran tahay, oo ah ururinta, kaydinta, ilaalinta iyo xaqiijinta macluumaadka shaqsi kasta oo ku nool Puntland.
Ra’isul Wasaaraha Federaalka iyo Madaxweynaha Puntland oo ka Qaybgalay Mashruuca Diiwaangalinta Dadka Puntland.
Waajibaadyadaas waxaa ka mid ah
Bixinta nooc kasta oo warqad sharci
Qorshaynta adeegyada rayidka iyo ciidanka
Ka hortegidda iyo la dagaalanka is dabamarinta iyo xadida aqoonsiga
Qorshaynta adeegga bulshada iyo difaacida bulshada
Dejinta liiska cod bixiyayaasha iyo aftida
Maaraynta kiisaska madaniga iyo kuwo ciqaabta ah ee Maxkamadaha
Ilaalinta socdaalka dalka (VISA)
Ka hortegida tacadiyada dumarka iyo caruurta
Gacan ku haynta iyo ilaalinta xog kaydiyaha (Date Server).
Haddaba, Mudadii uu agaasime Jubba ka howlgalayay wasaaradda wuxuu xiriir wanaagsan oo caafimaad qaba la lahaa shaqaalaha iyo Masuuliyiinta wasaaradda, guddoomiyayaasha degmooyinka Puntland iyo bulshada qaybaheeda ee ku nool degmooyinka, gaar ahaan kuwa ka baxsan laamiga
Waa Masuul fikir dheer iyo khibrad ka haysta shaqada shacabka iyo dowladda Puntland uu u hayo, waa masuul ka soo dhalaalay masuuliyiidii loo igdmay, waa masuul aad loola dhacay waxqabadkiisa iyo isbedelka uu wasaaradda arrimaha gudaha ku sameeyay mudadii koobnayd ee uu agaasimaha ka ahaa
Horumarka, hufnaanta, howlkarinimada iyo Maamul wanaaga uu ku sifoobay, waxaa loo baahan yahay in tixgelin lagu siiyo, oo aan la ceebayn, laguna been abuuran, iyadoo loo xaglinayo shakhsiyaad ka taajiray oo lacag badan ka sameeyay waajibaadkii shaqo ee dowladda qayb ka mid ah, welina u gaajaysan in qaybo kale oo wajibaadkaasi la wareegaan.
Gabagabadii, Agaasime Jubba Cali Nuur wuxuu shacabka iyo dowladda Puntland oo uu muddo 10 sanno u soo shaqaynayay ka mudan yahay bilad dahab ah iyo abaalmarin in lagu sharfo.
Warbixinta waxaa ka muuqata in ninkani yahay great civil servant. Fadlan adeegga bulshada halkaas ka wad, siyaasina ha noqon. Tan ayaad ku liibaanaysaaye.
Great leader nin howl kar ah oo waxbadan qabtay inaa tahay runtii cidna kama daboolna agaasime horey u soco markasta hana u joojin dadkan xasidku ku badan yahay guul iyo hormar wcn ku rajeena agaasime juba